Izindaba - UZhou Jiangyong uye kumkhiqizi wemaskhi waseJiande wayokwenza uphenyo
UKUGOQA UHLOBO LOMASKI
UHLELO UMPHEFUMuli OLAHLEKA
Umlando We-CM Mask
UZhou Jiangyong waya kumkhiqizi wemaskhi weJiande ukuyophenya
Ntambama ngoJanuwari 27, uZhou Jiangyong, oyilungu leKomidi eliPhezulu leProvince Party Committee kanye noNobhala weKomidi lePhathi likaMasipala waseHangzhou, waya kwaChaomei Daily Chemical Co, Ltd. (umkhiqizi womkhiqizo wokuvikela ubhubhane) ukuyophenya. Ugcizelele ukuthi kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe ngokuphelele imiyalo ebalulekile kaNobhala Jikelele uJinping, futhi ngokuya ngezinqumo nokuthunyelwa kweKomidi Elikhulu Leqembu, uMkhandlu Wombuso, iKomidi Leqembu Lesifundazwe kanye noHulumeni WesiFundazwe, benza yonke imizamo ukwenza umsebenzi omuhle ekukhiqizeni nasekunikezeni ngezinto zokuvikela ubhubhane, ukuqinisekisa izidingo zokuvikela ubhubhane, ukulawula nokwelashwa, nokuqinisekisa ukuphepha nokuphepha kwabantu. Umzimba onempilo. Abaholi beDolobha laseHangzhou uXu Ming noKe Jixin kanye nabaholi bethu bedolobha uTong Dingqian, uZhu Huan, noZheng Zhihua babambe iqhaza.
Ku-workshop yeChaomei Daily Chemical Co., Ltd., amabhokisi ezimaski agcwele phama futhi akulungele ukuthunyelwa kuzo zonke izingxenye zezwe. Ukuze uvimbele futhi ulawule ubhadane lwe-pneumonia obangelwe yi-coronavirus entsha, abasebenzi baseNyakatho Korea, i-United States kanye neJapan Chemical banikele ngoMkhosi Wentwasahlobo ukuhlangana kabusha nemindeni yabo futhi babuyela efektri basebenza isikhathi esengeziwe ukwenza imaski .
Eduze kolayini wokukhiqiza waseNyakatho Korea nase-United States, uZhou Jiangyong uzwakalise ukubonga kwakhe kubasebenzi baseSexiaojia kuwo wonke umuntu, futhi wakhuthaza wonke umuntu ukuthi andise umkhiqizo, asheshise ukulethwa kwemikhiqizo, futhi enze iminikelo eminingi ekuvikeleni nasekulawuleni izwe , isifundazwe, nedolobha. Ngemuva kokuqonda inqubo yokukhiqiza, umthamo wokukhiqiza kanye nokusungulwa kwamamaski ngokuningiliziwe, uZhou Jiangyong uveze ukuthi amaski okuvikela yizinto ezibalulekile zokuvimbela nokulawula ubhubhane. Selokhu kwaqubuka inyumoniya ebangelwe yi-coronavirus entsha, isidingo samaski nezinye izinto zokuvikela sikhuphukile. Izinkampani ezihlinzeka ngempahla yokuvimbela nokulawula ziyasazi isimo esijwayelekile futhi zibheka isimo sonke, ziyeke isikhathi sokuphumula seMikhosi yaseNtwasahlobo, zitshale ngokugcwele eziqinisekisweni zokukhiqiza, futhi zidlale indima ebalulekile ngezikhathi ezibucayi. Ngiyethemba ukuthi uzokwenza konke okusemandleni ukunqoba ubunzima, futhi ngaphansi kwesisekelo sokuqinisekisa ikhwalithi nokuphepha, uzozama ngakho konke okusemandleni akho ukukhulisa amandla okukhiqiza nokuqinisekisa izidingo zezikhungo zezokwelapha kanye nomphakathi. Yonke iminyango efanele kufanele yenze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukusebenza, ukuxhumanisa kanye nokuxazulula izinkinga ezikhona njengokwabiwa kwempahla eluhlaza, ukusatshalaliswa kwempahla, ukuhlolwa kwekhwalithi yomkhiqizo, kanye nokwabiwa okunengqondo ngamabutho amavolontiya avela kuma-ejensi, amabhizinisi kanye nezikhungo ukusiza ekukhiqizeni, nokusiza amabhizinisi ngokwemigomo yamandla, izinsizakusebenza kanye nezimali. Umthamo wokukhiqiza ogcwele uqinisekisa ukunikezwa kwezinto zokuzivikela ezifana namaski futhi unikeza ukusekelwa okuqinile kokuvikela nokulawula ubhubhane.
IShangshan Village, idolobha laseYangcunqiao, idolobha laseJiande, iHangzhou, isifundazwe saseZhejiang, eChina
Umlando Wenkampani ye-CM Mask